Nri na nri - Vondt.net - peeji nke 16 nke 16
Udi akwukwo: nri na nri
Nwere mmasị na nri nri na ahụike gị? N'ebe a, ị ga - ahụ isiokwu na nri ụdị. Site na nri anyi tinyere ihe ndi eji eme nri, ogwu, nkpuru osisi, ihe onunu na ihe ndi ozo.
Etu esi ewelata ohere nke ọrịa akụrụ
02 / 11 / 2015 /0 Comments/i Nri na nri/av ewute
Akụrụ na-elekọta gị anya site na iwepu nsị anụ ahụ, na-eme ka vitamin D rụọ ọrụ na ịhazi ọbara gị. Ndị a bụ ụzọ 9 ị nwere ike weghachite ọrụ.
Akụrụ bụ akụkụ ahụ achara, anụ ahụ dị mkpa na-alụ ọgụ kwa ụbọchị iji mee ka ahụ gị ghara idozi. Akụrụ na-enyocha ọbara nwere ihe ndị na-emebi emebi. A ga-ewepụsị ihe mkpofu ahụ dịka mmamịrị. Ha na - enyere aka ịchịkwa ọbara mgbali site na ịchịkwa nnu na mmiri nke anụ ahụ.
- Isi ọrụ nke akụrụ
Isi ọrụ akụrụ bụ idozi nguzo n’ahụ (homeostasis).
Usoro filtration nke ahụ - Na - ewepu ihe mkpofu n’obara
Na-akwagide nrụgide cellular na nha ya
Na -eme ka ọnụọgụ nke ion dị na mmiri sel
Maka ọrụ acid / base balance (pH) n'ime ọbara
Ọ na-ewekwa glucose site na akụrụngwa (ewepu carbohydrates)
Mmepụta homonụ nke EPO
Na-agbanwe vitamin D adịghị arụ ọrụ
Mmepụta Renin - nke na-achịkwa ọbara mgbali
Dịka ị siri hụ, akụrụ na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ahụ gị, mgbe ahụ ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị iji kwụọ ha ụgwọ ọrụ dị mma maka ahụike akụrụ kwalite?
Usoro 9 dị mfe maka ahụike akụrụ
Rie nụ ike - Lekwasị anya n'ihe ị na-eri na mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi (gụnyere kranberị ihe ọ juiceụ nutsụ), akwụkwọ nri, mkpụrụ na anụ na-edozi ahụ
Na-emega ahụ oge niile - Mmega ahụ na-eme ka ahụike ọria na akụrụngwa dị mma na mgbasawanye ọbara
Ọbụna shuga dị n'ọbara - Zere ịdị ụtọ nke ukwuu na ndụ ụbọchị niile. Ọtụtụ shuga na-eziga shuga ọbara na ala
Lelee ọbara mgbali gị - Mee ka GP gị nyochaa ọbara ọbara gị
Belata nnu oriri ma drinkụọ mmiri mgbe niile - Nkịtị mmiri oriri ana achi achi na akụrụ na 'flushed'
Kwụsị ise siga
Zere ị excessiveụ ọgwụ na-egbu mgbu na ọgwụ ndị ọzọ - Ndị a nwere ike isi ike na akụrụ
Gaa na nyocha ahụike maka nyocha nke ọrụ akụrụ
Y’oburu nsogbu akụrụ n’ime ezinụlọ should ga-aga maka nyocha mgbe niile
Ndị a bụ ụzọ dị mfe iji mee ka akụrụ gị dị mma. Nanị nsogbu bụ na anyị na-ejikarị akụrụ egwu, wee si otú a chefuo na ha chọkwara nlekọta ụfọdụ na ndụ kwa ụbọchị. Gbalịa mee ihe ndị a dị mfe ma nye ọdịnihu gị onyinye ụbọchị ọmụmụ nke ndụ gị.
- Ọzọkwa gụ: Pink Himalayan Nnu nke uru ahụike bara ụba
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/female-doctor-with-glasses-bw-600.jpg?media=1648573622 389 650 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2015-11-02 22:47:512015-11-02 22:49:24Etu esi ewelata ohere nke ọrịa akụrụ
Jinja na -ebelata mgbu ahụ na-akpata.
10 / 09 / 2015 /0 Comments/i Nri na nri, ọzụzụ/av ewute
Jinja nwere ike belata ihe mgbu ma belata ihe mgbu na-ebute mmekpa ahụ. A na - enweta nsonaazụ na - egbu mgbu site na ị consumụ nkịta ma ọ bụ nke agwọ ọkụ. Nke a gosipụtara nyocha nke Black et al dere na Journal of Pain na 2010.
Jinja - ugbu a nwapụtara mmetụta dịịrị mmadụ
Jinja egosiputala mmetụta mgbochi mkpali na ọmụmụ anụmanụ, mana ejighị n'aka na mmetụta ya na mgbu ahụ mmadụ. A na-atụ aro na ọgwụgwọ okpomọkụ nke ginger ga-eme ka ọ nwekwuo ihe mgbu na-ebelata, mana nke a na-agbagha na ọmụmụ ihe a - dịka mmetụta dị ukwuu dị ukwuu mgbe ị na-eri ginger ma ọ bụ na-ekpo ọkụ.
Ebumnuche nke ọmụmụ a bụ inyocha nsonaazụ ginger karịa ụbọchị 11 na nsonaazụ ya na mgbu anụ ahụ akọpụtara. E kewara ọmụmụ ihe abụọ, nke gbara ìsì abụọ ke otu atọ;
(1) Gwunye okuko
(2) Gita gita gita
Ndị sonyere na nkebi abụọ mbụ riri gram abụọ nke ginger kwa ụbọchị maka ụbọchị iri na otu. Ha kwesiri ime ihe omume iri na asatọ na ikpere aka iji kpalite ibu ibu - nke kpatara ihe mgbu na mbufụt. A na-atụle ọkwa mgbu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe (mgbali, ọkwa prostaglandin, olu ogwe aka, ọtụtụ mmegharị na ike isometric) tupu ụbọchị 2 mgbe emechara ahụ.
Nsonaazụ sitere n'ọmụmụ ihe: Jinja bụ ọgwụ mgbu
Otu abuo na ndi otu abuo mezuru otu ihe ahu ma abia na ihe ngbasi ike n’olu nwere mmasi ma e jiri ya tụnyere ndi placebo. Nkwubi okwu a bụ na ginger bụ ihe mgbu okike nwere ike ịba uru kwa ụbọchị. N’oge gara aga, egosikwara nke ahụ Jinja nwere ike belata mmebi ụbụrụ site na ọrịa ischemic. Emepụtakwala nyocha dị mma ma a bịa n'ihe enyemaka iji gbochie mgbu ogbu na nkwonkwo.
Gita tii ma ọ bụ thai curry
Ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na ginger, mgbe ahụ anyị na-atụ aro ka ị jiri tii na lime mee tii - ma ọ bụ ikekwe bee ya n'ime obere iberibe ma tinye ya na ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Thai ma ọ bụ nke yiri ya.
Ọ ga-amasị anyị ịnụ n'ọnụ gị na ngalaba ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnwere ezigbo ndụmọdụ maka nri ma ọ bụ usoro nri.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Ingefær-Naturlig-smertestillende.jpg?media=1648573622 356 600 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2015-09-10 14:07:342015-09-10 14:07:34Jinja na -ebelata mgbu ahụ na-akpata.
Peeji nke 16 nke 16«<141516